Nin lagu xukumay 5 sano oo xabsi ah kadib markii uu faafiyay COVID gudaha Vietnam
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Wararka Jabinta Vietnam » Nin lagu xukumay 5 sano oo xabsi ah kadib markii uu faafiyay COVID gudaha Vietnam
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Crime • Wararka Dowladda • Caafimaadka Warka • News • Dadka • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Ammaanka • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda • Wararka kala duwan • Wararka Jabinta Vietnam
Nin 28-jir ah oo u dhashay Vietnamese ayaa xabsi 5 sano ah ku muteystay socdaalka iyo faafinta fayraska COVID-19.
Jebinta xannibaadaha COVID-19 waxay horseedaa xukun xabsi oo dheer.
Nin u dhashay Vietnamese oo 8 qof qaba COVID-19 ayaa xabsi galay.
Maanta, waxaa jira in kabadan 13,000 oo dhimasho ah iyo 520,000 COVID-19 xaaladood gudaha Vietnam.
Le Van Tri, oo 28 jir ah ayaa lagu xukumay “faafinta cudurrada faafa ee halista ah” waxaana lagu xukumay shan sano oo xabsi ah kadib markii uu jebiyey xannibaadaha karantiil ee daran ee coronavirus isla markaana ku faafiyay dadka kale.
Xukun iyo xukun deg-deg ah ayaa dhacay intii ay socotay dacwad hal maalin ah oo ka socotay Maxkamadda Dadka ee gobolka koonfurta Vietnam ee Ca Mau.
“Tri wuxuu dib ugu laabtay Ca Mau isagoo ka yimid Ho Chi Minh City… wuxuuna jebiyey xeerarka karantiil ee 21-ka maalmood ah,” ayaa lagu yiri qoraalka maxkamadda.
“Tri wuxuu cudurka qaaday sideed qof, oo midkood u dhintay fayraska kadib hal bil oo daaweyn ah,” ayay raacisay.
Laba qof oo kale ayaa lagu xukumay Vietnam 18 bilood iyo labo sano oo xabsi ah oo la hakiyey isla eedeymahaas.
Vietnam wuxuu ahaa mid ka mid ah sheekooyinka guusha coronavirus ee adduunka iyada oo ay ugu mahadcelinayaan tijaabinta ballaaran, raadinta xiriirka gardarada ah, xayiraadaha xuduudaha oo adag, iyo karantiil adag. Laakiin kooxo cusub oo caabuqyo ah ilaa dabayaaqadii Abriil ayaa hoos u dhigay rikoorkaas.
Ca Mau, gobolka koonfureed ee Vietnam, ayaa soo sheegay kaliya 191 xaaladood iyo laba dhimasho tan iyo markii masiibadu bilaabatay, aad uga hooseeya ku dhawaad ​​260,000 xaaladood iyo 10,685 oo ku dhintey xudunta coronavirus ee dalka, Ho Chi Minh City.
Waxaa watay kala duwanaanshaha Delta ee aadka loo gudbin karo, hirarka afaraad ee Vietnam wuxuu bilaabmay Abriil 27. Waqtigaas, 35 qof oo kaliya ayaa u dhintay COVID-19, halka tirada guud ee cudurrada ay ka yaraayeen 4,000. Maanta, waxaa jira in kabadan 13,000 oo dhimasho ah, halka kiisaska ay gaarayaan 520,000.
Qiyaastii boqolkiiba 80 dhimashada iyo kala bar caabuqyada ayaa ka dhacay magaalada ugu weyn dalka Ho Chi Minh City.
Hoy ay ku noolyihiin sagaal milyan oo qof, Ho Chi Minh City waxay ku jirtay xiritaan guud tan iyo 23 -kii Ogosto, iyadoo dadka deggan laga mamnuucay inay ka baxaan guryahooda xitaa inay wax ka iibsadaan cunto.
Iyada oo xayiraadaha la dejiyay ilaa 15 -ka Sebtember, Raiisel wasaaraha cusub ee la doortay Pham Minh Chinh ayaa amar ku bixiyay in baaritaan ballaaran lagu sameeyo dadka deggan magaalada isla markaana la geeyo askar si loo xoojiyo joogitaanka amarrada guriga iyo gacan ka geysashada bixinta cuntada.